EDEBE NDỤ MAKA OTU NA VKONTAKTE: KEDU KA Ọ BỤ, OTU ESI EME - AKỤKỌ - 2019
Netwọk mmekọrịta "VKontakte" kwa ọnwa na-atụgharị uche na ndị ọrụ ya na innovations na ibe na ndị asọmpi enweghị. Oge Disemba a abụghị otu. Ikekwe, ihe kachasị mmasị, site na njedebe nke afọ, bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa nke ndị Runet - live cover maka ìgwè VKontakte.
Kedu ihe mkpuchi ndụ
Nhọrọ mkpuchi ndụ
Otu esi eme ka mkpuchi ndụ na VKontakte: ntụziaka nzọụkwụ site nzọụkwụ
Ihe mkpuchi ndụ bụ ihe karịrị naanị akwụkwọ akwụkwọaja maka obodo mara mma. Ọ na-abata na ndụ ekele maka vidio ndị e tinyere na ya ma na-ada ụda n'ihi egwu dị egwu na usoro vidio. Ọzọkwa, ihe ndị a abụghị naanị uru ndị dị ugbu a maka ndị nwe ụlọ na ndị ọkachamara SMM. Na mgbakwunye, ha nwere ike:
na nanị sekọnd ole na ole iji kwuo banyere ụlọ ọrụ gị - gbasara akụkọ ihe mere eme na taa;
kpọsaa ọtụtụ ngwá na ọrụ;
gosipụta ihu igwe gị (ọ bụrụ na ọ bụ naanị na vidiyo na-enye gị ohere ịmepụta ngwaahịa ahụ a kwusara n'ihu site n'akụkụ niile);
weputa ozi kachasị mkpa nye ndị ọbịa obodo.
N'iji mkpuchi na-ekpuchi, ị nwere ike ịkwasa ngwaahịa ma ọ bụ mee ka ị mara ozi ọma ma dị mkpa.
Mgbe ị na-eke ụdị ọhụụ ọhụrụ, a na-eji foto ise na ọtụtụ vidiyo mee ihe, dochie nke ọ bụla ọzọ. Nhọrọ ahọrọ nke ọma na-enye gị ohere iji dochie anya nchịkọta ederede dị ogologo ma na-echekwa maka ìgwè dị iche iche, n'ihi na ndị ọrụ nwere ike ịghọta ọtụtụ n'ekwughị okwu.
A na-enweta ọhụụ ndụ naanị nye ndị nchịkwa nke obodo ndị a kwadoro. Otú ọ dị, ugbu a na mmalite nke 2019, dị ka ọrụ mgbasa ozi nke netwọk mmekọrịta na-eziga, ndị nwe ndị ọzọ niile ga - enwe ike ịnwale ọrụ.
Na mgbakwunye, ugbu a, a na-emepụta nkà na ụzụ ọhụrụ maka ịmepụta mkpuchi maka smartphones na mbadamba. Na kọmputa na laptọọpụ na-anọchi anya iji hụ ihe mkpuchi ụdị ọhụrụ dị ugbu a enweghị ike. Ma ọ ga-eme ka ha nweta ahụmahụ na-aga nke ọma na a gaghị agwa ha ụlọ ọrụ ahụ.
Site n'ụzọ, na ihuenyo nke ngwaọrụ a mkpuchi ndụ ka a pụta ìhè ọ bụghị nanị n'ihi nsonye nke vidiyo ahụ, kamakwa n'ihi nha ya. Ọ bụ ugboro anọ "nkịtị" akwụkwọaja maka obodo. Tụkwasị na nke ahụ, onye ọrụ ahụ nwere ike iwelie mkpuchi n'onwe ya, gbatị ya ruo nha ihuenyo dum, ma tinyezie ụda ịnụ ihe a kwuru ma ọ bụ kpọọ na nchekwa nchekwa.
N'otu oge ahụ, nnukwu mkpuchi buru ibu adịghị emegide esemokwu ahụ dị adị (ma dochie ya): avatars, aha ìgwè; agbụrụ obodo na bọtịnụ arụ ọrụ nke a na-etinye n'ime akụkụ ọhụrụ nke mkpuchi ahụ.
Ruo ugbu a, ihe mkpuchi dị ndụ bụ nanị, nke a ga-enyocha na obere ọnụọgụ nke ibe nke ịkparịta ụka n'Ịntanet.
Ikekwe nhọrọ nke ndị gbalịrị ntinye nhọrọ ọhụrụ ahụ bụ indicative. Ndị ọsụ ụzọ gụnyere ndị nnọchiteanya nke ụdị ụwa niile:
Nike Football Russia na-echekwa (ha gara nke ọma ịbanye na mgbasa ozi vidiyo nke akpụkpọ ụkwụ egwuregwu, nke a na-ere n'èzí ha);
PlayStation Russia otu (nwere mmasị na ndị ọrụ nke obere video magburu onwe ya - ihe merenụ nke na-akpali akpali egwuregwu);
Ụgbọ ala S7 (iji ihe oyiyi na-eme ka ụgbọelu na-apụ na mmalite);
ọkpụkpọ nkume Twenty One Pilots (onye mere ndụ na-ekpuchi oge nke arụmọrụ egwu ya).
Otú ọ dị, maka ugbu a, nke a nwere ike ịnwale ihe a ga-eji ihe mkpuchi ahụ mee ka ọhụụ na irè nke mgbasa ozi a debere ebe a. Dịka ọmụmaatụ, otu egwú dị iche iche, na mgbakwunye na igosipụta vidio site na arụmọrụ ndị gara aga, nwere ohere iji kpọsaa egwu egwu n'ọdịnihu. Ụlọ nkwakọba uwe na-enweta ngwá ọrụ iji gosipụta ihe ọhụrụ nchịkọta, na-agwa ndị ahịa banyere ego ndị dị ugbu a. Teknụzụ na-adọrọ mmasị ndị na-eduzi ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọṅụṅụ: ugbu a na mkpuchi ha, ha nwere ike igosi efere dị iche iche ma na-anya isi n'ime ime ụlọ.
Banyere ihe ndị a chọrọ maka ihe, ihe oyiyi ahụ kwesịrị ịdị na-ahụ. Ha n'obosara bụ 1080, na elu bụ 1920 pikselụ. Otú ọ dị, ndị mmepe nwere ike iji nha ndị ọzọ, ma ka ha dịrị na nke 9 ruo 16.
Iji nweta nsonaazụ dị mma, ịkwesịrị ịgbaso usoro ahụ mgbe ị na-emepụta ihe mkpuchi.
A na-achọ vidiyo vidio dị ndụ:
na MP4 usoro;
na H264 mkpakọ ọkọlọtọ;
nke nwere okpukpu - mita 15-60 kwa nkeji;
ogologo oge - ọ bụghị ihe karịrị ọkara nkeji;
size - ruo 30 MB.
Ejiri ihe dị na 9 ruo 16 na-ekpuchi ihe mkpuchi ahụ
Na-ebubata mkpuchi ndụ na-ewere ọnọdụ na ntọala obodo.
Ịnwere ike ibudata mkpuchi site na ntọala otu.
N'otu oge ahụ, ịwụnye ihe ọhụrụ (maka iOS na gam akporo), ị gaghị etinye aka na ihe mkpuchi ochie (ọ ga-adịgide maka ntanetị na ngwa ngwa).
Ihe mkpuchi ndụ na-ezute usoro nke taa, mgbe a na-eleba anya na ihe ọmụma niile. O yikarịrị ka ọ bụ mmalite nke afọ na-esote, nnukwu ntinye nke mkpuchi dị otú ahụ ga-amalite, nke ga-eji dochie anya mgbanwe dị ugbu a. Ihe a na-eme na nke ikpeazụ a ga-amalite nwayọọ nwayọọ.